Mahareta ary mivonòna
«Dia tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tano mafy, ka mibebaha. Koa raha tsy hiambina hianao, dia ho tonga toy ny fihavin'ny mpangalatra Aho, ka tsy ho fantatrao izay ora hihaviako aminao.» - Apôk. 3:3.
[...] Ny teny hoe «mahareta» dia tsy midika hoe mahareta amin'ny fahotanao; fa mahareta amin'ny faherezana, ny finoana, ny fanantenana izay nomen'Andriamanitra anao tamin'ny alalan'ny Teniny. Aza mba manary toky na oviana na oviana. Ny olona diso fanantenana dia tsy mahavita na inona na inona. Manao izay hahadiso fanantenana anao i Satana ary tsy mitsahatra ny manakivy anao amin'ny filazany fa tsy ilaina ny manompo an'Andriamanitra, tsy ahazoan-tombony izany ary aleo mankafy ny rendrarendran'izao tontolo izao. «Fa inona moa no soa [ho] azon'ny olona, raha mahazo izao tontolo izao, kanefa very ny ainy?» [...] Nantsoina «haharitra hatramin'ny farany» isika ary hiaina ny fahazavana izay raisintsika avy any an-danitra. Inona moa no antony? Satria irin'Andriamanitra ny hihazonantsika ny fahamarinana mandrakizay, sy ny hanekentsika ho fitaovana ampiasainy mba hampita ny fahazavany amin'ireo izay tsy mahazo an-tsaina ny fitiavan'Andriamanitra azy. Fony ianao nanolotra ny tenanao ho an'i Kristy dia nanao voady teo imason'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina — dia teo imason'Andriamanitra telo izay Iray ary Masina indrindra any an-danitra. «Mahareta hatramin'ny farany» amin'izany voady izany (...)
Tsy azon'ilay fahavalo atao na oviana na oviana ny hanaisotra eo am-pelatanan'i Kristy ny olona izay matoky tsotra fotsiny ireo teny fikasany. Raha mino ny fanahy iray ka miasa amim-pankatoavana dia ho hita taratra eny aminy ny toetran'Andriamanitra ary hamirapiratra ao aminy mba hanazava ny fahatakarany ny fahazavana avy amin'Andriamanitra. Endrey ny halehiben'ny tombontsoa ananantsika ao amin'i Kristy Jesôsy! — Ms 92, 1901.